एक महिनामै यसरी घटाउनुहोस् आफ्नो १० केजी तौल - AjaKoSamachar
अधिकृत र जारी पूजीसमेत बढाउने गरि एनएमबि बैंकले लाभांश पारित गर्न…
सन्तोष मास्टर सेफको फाइनल राउण्डमा
एन.ई.ए को २०२० भर्चुअल करियर फेयर हुँदै
नेप्से २८.७९ अंकले बढ्दा कारोबार रकम कति?
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको साधारण सभा आवाहन, बुक क्लोज कहिले?
चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओ बाँडफाँट
हिमालयन बैंकको लाभांश घोषणा, नगद र बोनस कति ?
नेपाल एसबिआई बैंकले गर्यो लाभांश घोषणा
युट्युबलाई गूगलले सपिङ साइट बनाउला त ?
नेपालमा कति पर्छ ४ नयाँ आइफोन १२ मोडल र होमपड मिनीको…
१० वर्ष पछि परिवर्तन हुदै विकिपेडियाको डिजाइन
एप्पलले सार्बजनिक गर्यो एप्पल वाच “सिरिज ६” र एप्पल वाच “एस…
नेपालमा आयो कियाको “सोनेट”, अहिले सम्मकै सस्तो कम्प्याक्ट एसयुभी
हुन्डाईको ‘ग्राण्ड आई टेन नियोस’ सार्बजनिक, कति पर्छ मूल्य अनि के…
नेपाली बजारमा हुण्डाईकाे ‘औरा’ सार्वजनिक, मूल्य मात्र ३३ लाख ९६ हजार…
न्यु स्टाइलिस स्कोडा र्‍यापिड टीएसआई नेपालमा [कस्तो छ मूल्य]
संजय दत्त भन्छन् ” क्यान्सर बाट’म चाँडै यसको बाहिर आउनेछु “
नायिका करिना कपूर फेरी गर्भवती!
युवा: कसरी स्वस्थ रहने
एक महिनामै यसरी घटाउनुहोस् आफ्नो १० केजी तौल
कंगनाको ‘ट्याटू’ भाइरल
बार्सिलोनाविरुद्धको खेल डी मारियाले गुमाउने
By आजको समाचार एडिटर
खेलकुदआजको समाचार एडिटर - February 10, 2021 0
एजेन्सी | फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का अट्याकिङ मिडफिल्डर एन्जल डी मारियाले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाविरुद्धको खेल गुमाउने...
सेयर मार्केटआजको समाचार एडिटर - January 22, 2021 0
चन्द्रागिरि हिल्सले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको आईपीओ माघ ९ गते, शुक्रबार बाँडफाँट भएको छ। कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल...
सेयर मार्केटAKS एडिटर - December 23, 2020 0
अधिकृत र जारी पूजीसमेत बढाउने गरि एनएमबि बैंकले लाभांश पारित गर्न साधारण सभा बोलायो
एनएमबि बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफा बाट आफ्ना शेयरधनिहरुको लागी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताब स्वीकृत गर्नको लागि पुस् २९...
आजको समाचार एडिटरhttps://www.ajakosamachar.com/
पछिल्लो समय मानिसहरुको खानपान तथा जीवनयापनका कारण मोटोपनाको समस्या बढ्दै भएको छ । मोटोपनलाई रोगको घर नै पनि भनिन्छ । दुब्लो मानिसको तुलनामा मोटा मानिसहरूलाई बढि रोग लाग्ने भएकाले नै यसो भनिएको हो ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु सम्बन्धी रोगहरु, क्यान्सर तथा मृगौलाको समस्यालगायतका रोगहरु मोटा मानिसहरुमा बढि लाग्ने रोग हो । व्यस्त जीवनशैली, अस्वस्थकर आहार, व्यायामको नगर्नु नै मोटोपनको मुख्य कारण बन्न गएको छ । अझ सहरी जीवनशैलीमा यो समस्या झनै दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
मोटोपन घटाउन मानिसहरु विभिन्न तरिकाहरु अपनाइरहेका हुन्छन् । यसको लागि व्यायाम तथा कसरतहरु गर्न सकिन्छ । योगाले पनि मोटोपना घटाउन मद्यत गर्छ । त्यसको साथसाथै आफ्नो जीवनशैलीमा तथा आहार विहारमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । तर यो विधिबाट मोटोपन घटाउन समय लाग्छ ।
छोटो समयमा प्रभावकारी ढंगबाट मोटोपना घटाउन बजारमा विभिन्न फिटनेर केयर सेन्टर पाइन्छन् । त्यसमध्ये ‘हेल्दी होम एन्ड नेचुरल हेल्थ केयर’ले पनि ग्राहकहरुलाई राम्रो सेवा दिइरहेको छ । कोरियन पद्धतिको यो उपचार विधि मोटोपन कम गर्ने एउटा अचुक उपायका रूपमा मानिन्छ । यो प्रविधिबाट महिनामा ५ देखि १५ केजीसम्म तौल घटाइन्छ ।
नेपालमा हेल्दी होमले निकै लोकप्रियता कमाइरहेको छ । सन् २०११ बाट यसले नेपालमा सेवा सुरु गरेको हो । नेपालमा पहिलो पटक मोटोपना घटाउने पद्धति अवलम्बन गरेको यस संस्था स्वास्थ्य व्यवसायबाट दर्ता भई सञ्चालनमा आएको हो । गुणस्तरीय सेवा तथा सतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने भएकाले नै हेल्दी होमको लोकप्रियता चुलिएको छ । यसको सेवाबाट ९५ प्रतिशत ग्राहकहरु सन्तुष्ट छन् ।
हेल्दी होममा कार्यरत सबै कर्मचारी तालिम प्राप्त रहेको र व्यवस्थापन पक्षमा स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू भएको बताइन्छ । हालसम्म हेल्दी होमले देशभर १० स्थानबाट सेवा दिइरहेको छ । उपत्यकाभित्र जमल, बानेश्वर, जाउलाखेल, महाराजगन्ज, बौद्ध एवम् उपत्यका बाहिर धरान, भैरहवा, पोखरा, नारायणघाट र बुटवलबाट आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
हेल्दी होमका सेवाहरूः
हेल्दी होममा लेजर थेरापीबाट तौल घटाइन्छ । सुुरुवातमा बीएमआई टेस्टमार्फत मोटोपनाको आकार निर्धारण भइसकेपछि कति केजी घटाउनुपर्ने हो, विज्ञको सल्लाह बमोजिम उपचार सुरु हुन्छ ।
– कोरियामा पत्ता लगाइएको ‘अल्ट्रासोनिक क्याभिटेसन, भ्याकुम तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी मसाज थेरापी’बाट शरीरका विभिन्न भागमा मसाज गरी शरीरमा रहेको कडा बोसोलाई पगालिन्छ र पग्लेको बोसो दिशा, पिसाब र पसिनाको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर निस्काशन हुन्छ । यो प्रविधि डब्ल्यूएचओ र एफडीए प्रमाणित छ । यो प्रविधिको कुनै हानी नभएको होमको दाबी छ ।
– त्यस्तै अर्को ‘हिट र प्रेसो मसाज थेरापी”को सहायताले शरीरको मोटोपना घटाइन्छ । यसले शरीरमा पैदा हुने तापद्वारा शरीरमा बढी भएको बोसोलाई पगाल्छ र मोटोपना हटाउन कम गर्छ ।
– हेल्दी होममा प्रयोग हुने अर्को थेरापी हो – ”जपानिज अल्ट्रा भाइब्रेट मसाज थेरापी” । यो प्रविधिको प्रयोगबाट शरीरका विभिन्न भागमा मसाज गरी शरीरमा भएको बोसोहरूलाई पगाल्न र सो पग्लेको बोसो दिशा, पिसाब तथा पसिनाको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ ।
– यहाँ ”कुल सेपिङ थेरापी’बाट पनि मोटोपन घटाइन्छ । यो अत्याधुनिक कोरियन प्रविधिमा प्रयोग गरिएको कुलिङ प्रविधिबाट तापक्रम ऋणात्मक १० डिग्री सेल्सियसमा झारेर शरीरको भित्री भागमा रहेको बोसोलाई जमाउने र जमेको बोसो फुटाउने काम गरिन्छ । र त्या बोसो पनि दिसा, पिसाब तथा पसिनाको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ ।
– अर्को रहेको छ, ‘मेजो थेरापी । यसको माध्यमबाट शरीरमा रहेका कडा बोसोमा लिपोलाइटिक सोलुसन लगाई शरीरको बोसोलाई पगाल्ने र पग्लेको बोसो दिसा, पिसाब तथा पसिनाको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर निष्काशित गर्ने काम हुन्छ ।
यो समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? कृपया रियाक्ट गर्दिनु होला !
Previous article३ अर्ब बढीको कारोबार, बैंकिंग समूह मुख्य आकर्षण
Next articleयुनिक नेपाल लघुबित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड को आईपीयो आउदै
आजको समाचार एडिटर - January 22, 2021 0
चन्द्रागिरि हिल्सले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको आईपीओ माघ ९ गते, शुक्रबार बाँडफाँट भएको छ। कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँट...
AKS एडिटर - December 23, 2020 0
एनएमबि बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफा बाट आफ्ना शेयरधनिहरुको लागी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताब स्वीकृत गर्नको लागि पुस् २९ गते बिहान १०:३० बजे कृष्णटावोर...
आजको समाचार एडिटर - December 11, 2020 0
नेपाली सेफ सन्तोष साह ‘बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स् २०२०’ को फाइनल राउण्डमा प्रवेश गरेका छन् । विश्वकै प्रतिष्ठित टिभी रियालिटी शोमा बिभिन्न नेपाली लगाएत...
आजको समाचार - December 3, 2020 0
काठमाण्डौमा रहेको नेपाल इन्ट्रान्स एकेडमीले (Nepal Entrance Academy) कक्षा १२ को परिक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी "NEA Virtual Career Fair – 2020" आयोजना...
नेपालभर थप २१०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी
अन्य AKS एडिटर - November 19, 2020 0
पछिल्लो २४ घन्टामा देश भरिका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षण बाट २ हजार १सय ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ भने १७ जनाको कोरोना...
कुकुर तिहार किन मनाइन्छ?
अन्य AKS एडिटर - November 14, 2020 0
नेपालीहरुको महान चार्ड दशैँ पछि को अर्को ठुलो चार्डको रुपमा तिहार लाई लिने गरिन्छ। यामपंचको पहिलो दिन हामी काग पूजागरी मनउछौ भने दोश्रो दिन...
चलचित्र आजको समाचार एडिटर - October 15, 2020 0
बलिउडका धेरै मन पराउने अभिनेता संजय दत्तलाई हालै फोक्सोको क्यान्सर पत्ता लागेको थियो। उनको खबरले उनका परिवार र सहकर्मीहरूलाई मात्र होइन, तर उनका प्रशंसकहरूलाई...
मनोरंजन आजको समाचार एडिटर - October 7, 2020 0
भारतीय अभिनेत्री करिना कपूरले आफ्नो दोश्रो सन्तानलाई जम्म दिँदैछिन् । उनले ५ बर्ष अघि तैमुरलाई जन्म दिएर आमा बनेकी थिइन् । नायिका करिना कपूरले...
© AjaKoSamachar 2020 | All rights reserved.
आजको समाचार एडिटर - February 10, 2021
आजको समाचार एडिटर - January 22, 2021
AKS एडिटर - December 23, 2020
आजको समाचार एडिटर - December 11, 2020
आजको समाचार - December 3, 2020